6 yematsotsi ekutanga ematsotsi e2018 | Zvazvino Zvinyorwa
6 yematsotsi ekutanga ematsotsi e2018
Mazuva mashoma ekupedzisa gore, rugare rwese nerudo mune aya mazororo uye anofungidzirwa mufaro. Kana kwete. Saka ndinoenda kumberi kwangu kune zvitsva zvekutanga mumhando yeanondida, iyo yakasviba nhema. Sezvakasiyana nemarambi uye kutapira kwepolvorones uye marzipan. Enda 6 yeavo ekutanga emunyika uye epasi rese mazita ayo anoburitswa izvozvi muna Ndira. Kubva mubhuku rekupedzisira mune akateedzana neSweden tsotsi wezvepfungwa, Sebastian Bergman kana icho chakatumirwa chakasainwa nehunyanzvi mukutya kwepfungwa iyo iri imwe Sebastian, iyo Berliner Fiztek.
1 Ronda - Jorge Fernández Díaz
2 Kufa handizvo zvinorwadza zvakanyanya - Inés Plana
3 Kutumira - Sebastian Fiztek
4 Chokwadi cheAlligator - Massimo Carlotto
5 Zvirango zvinoruramiswa - Horjth & Rosenfeldt
6 Zuva iro rudo rwakarasika - Javier Castillo
Ronda - Jorge Fernández Díaz
Pakupera kwaNdira iyo nyowani nyowani nemunyori uye mutori wenhau yakaburitswa, izvo zvinodzosera ku Mumiriri Remil, hunhu hunopokana hwe Iyo banga.
Sista anonyangarika ndokusiya enigmatic message. Mushandi waPope Francis anoraira vamiririri vaviri vehungwaru kuti vamutsvage chero kupi. Kamwe chete, chipangamazano wezvematongerwo enyika akadzingwa nehurumende yeArgentina Iye anoshandirwa nagavhuna wenzvimbo muPatagonia kuvandudza chimiro chake uye kudzivirira njodzi yesarudzo. Asi iye achave nerubatsiro rweRemil kudzamara ivo vaviri vamhanya kuita State mhosva uye rakashata sangano.
Inofungidzirwa pavezvematongerwo enyika hriller nematsotsi novel musanganiswa, mariri nyaya dzisinganzwisisike dzerudo dzinosangana nekuomarara kwekuferefeta uye ine mutinhimira mukuru wecinema.
Kufa handiko kunonyanya kurwadza - Ines Plana
Zvimwe Rongedza rondedzero inonakidza ine mavara akanaka uye kutaurisa kwemvura. Anotitaurira nyaya yemurume anoratidzika akarembera musango repine kunze kweMadrid, maziso ake akabudiswa. Mune imwe yehomwe dzake vanowana bepa rine zita nekero yemukadzi: Sara Azcarraga, uyo anogara makiromita mashoma kubva pakaitika mhosva iyi. Frail, lonely, an lonely vodka drinker, Sara haana kusimba, akasurukirwa uye chidhakwa uye anodzivirira chero kusangana kwevanhu.
Julián Tresser, lieutenant weVashandi veVanhu, anotora nyaya iyi, achibatsirwa nekoporo kadiki Chur, uyo akatarisana nekuferefetwa kwematsotsi kekutanga, pasina kana chiratidzo. Tresser ichawana zvimwe chokwadi chinopa zvinosuwisa kupidigura kuvapo kwayo uye vachamaka nekusingaperi.
Iko kutumira - Sebastian Fiztek
A new thriller kubva kumunyori akabudirira wechiGerman we Therapy, Mutakuri 23 y Iyo Joshua chirongwa. Ino nguva inotaurira nyaya yechidiki chiremba wepfungwa Emma stein, uyo asisiri kubva pamba kubva paakabatwa chibharo muhotera. Yakanga iri iyo wechitatu akabatwa nemhondi psychopath iye chete akapunyuka ari mupenyu, kunyange asina kuona chiso chake. Mamwe mangwanani muposita anomusiira pasuru yakagadzirirwa muvakidzani wake, waasingazive. Uye nekuzvigamuchira, haafungi kuti hope dzake dzakaipisisa dzave kuda kutanga.
Chokwadi cheAlligator - Massimo Carlotto
Iyi ndiyo zita rekutanga mune akateedzana achitarisa muongorori wega wega akatumidza zita rekuti Cayman uye zvinoenderana neupenyu chaihwo hwemunyori..
Mu 1976 Alberto Magagnin akabatwa nemhosva yekuponda kwaEvelina Bianchini. Muna 1993, achiri parole, Magagnin akanyangarika pasina kana chiratidzo. Saka gweta rako, Barbara Foscarini, Anofunga kutendeukira kune mumwe mupurisa, uyo ari Marco Buratti, nguruve. Iye anoda neapo, Chinwiwa cheCalvados uye aimbove mutongi wemhosva yaive isina kururamisira.
Achiperekedzwa nemumwe wake asingaparadzanisike, mutengesi Beniamino Rossini, iye Cayman anotanga kuferefetwa kunozomutungamira kuti apinde mukati mekunze nekubuda kwenyaya yakavharwa kwenguva refu. Magagnin akange asina chikonzero chekuurayaAsi chimiro chake chakamuita iye wembudzi chaiyo.
Kururamiswa kurangwa - Horjth & Rosenfeldt
El zita rechishanu yeaya akatanhamara akateedzera ane WeSweden tsotsi wezvepfungwa wepfungwa Sebastian Bergman anoona mwenje pakati paNdira. Anotitaurira nyaya ye a terevhizheni nyeredzi yakawanikwa yakafa kubva pfuti kumusoro muchikoro chakasiiwa. Mutumbi wake wakatarisana nemadziro uye wakasungirirwa pachair mamwe mapepa ebvunzo.
Uku kuponda ndiko kwekutanga munhevedzano ichave iine vanhu vane mukurumbira sevanotambudzwa. Iyo Torkel Hölgrund Mhosva Yechikwata Ivo vachabata nyaya uye, senguva dzose, ivo vachabatsirwa nehunyanzvi uye ruzivo rwaSebastian Bergman. Ivo vanozogona kutevedzera zviwanikwa zvinowanikwa mukati hurukuro dzeinternet uye nemavara asingazivikanwe yakaburitswa mumapepanhau kugadzirisa zvakavanzika.
Musi wakarasika rudo - Javier Castillo
Javier Castillo anga ari munyori mupfupi wenyaya kubvira achiri kuyaruka. Nhoroondo yake yekutanga yaive yekubudirira mukutengesa pa internet yaive yakanzi Zuva iro pfungwa dzakarasika. Iye zvino aratidza izvi, imwe nyaya yakatakurwa nekufungidzira uye rudo zvakaenzana, izvo zvinovimbisa kuve chiitiko chitsva.
Panguva gumi nembiri mangwanani aDecember 14 mhandara izere nemaronda Anoratidzira akashama panzvimbo yeNew York FBI aine manotsi akati wandei eruvara muruoko rwake. Inspector Kukotama, ndiani mukuru weCriminology Unit, achaedza kutsvaga zvakavanzwa nemhandara iyi nekubatana kwake neimwe nyaya, yemukadzi akadimburwa musoro maawa gare gare uye ane zita rinoenderana neakanyorwa mune imwe yezvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » 6 yematsotsi ekutanga ematsotsi e2018
Mabhuku anoverengwa zvakanyanya muna 2017 kuSpain, Mexico, Argentina neColombia